January 8, 2020 - khitalinmedia
January 8, 2020 Khitalin Media 0
မလေးရှားနိုင်ငံက @RomizaRoman အမည်နဲ့ Twitter အသုံးပြုသူတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ ဘဝအကြောင်းအဖြစ်အပျက်အားလုံးကို သူမအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ Twitter ပေါ်မှာ အရာအားလုံးပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ် ။ Romiza ဟာ သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ အထက်တန်းကတည်းက တွဲခုတ်ခဲ့တာပါ။ အစပိုင်းမှာတော့ သူမတို့နှစ်ယောက်လုံး အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီး အထက်တန်းကျောင်းပြီးသွားချိန်မှာတော့ သူမတို့ဆက်လက်သင်ကြားတဲ့ ပညာချင်းမတူညီတော့လို့ အနည်းငယ်အနေဝေးသွားခဲ့ပါတယ် ။ […]
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ကို မြင်တော့ နစ် ၄၀ ကစုထားတဲ့ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတဲ့အဖွား အံ့ဩလို့မဆုံးဘူး
တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ မိုးရွာသွန်းနိုင်ဟု မိုးဇလ ထုတ်ပြန်…
သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်းရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်လွန်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းရယ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ စကားအရမ်းများတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် သူများတွေထက်ပိုပြီး ဖေးမဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သတိရပါနော်.. (၁) စကားပြောဖော်မရှိဘူး.. အမြဲတမ်းရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝမှာ စကားပြောဖော်မရှိလောက်အောင်ကို အထီးကျန်ဆန်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဘဝမှာ အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းပဲ […]
အီရန်ကို တိုက်ဖို့ သမ္မတအမိန့်ကို လေတပ် ၊ ရေတပ် ၊ ကြည်းတပ် အားလုံးက အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီ
မိန်းမတွေကိုလိမ်ရင် နောက်ဆုံးမှာလိမ်တဲ့ယောကျာ်းတွေပဲနောင်တရရတာပါ ….
ယောကျာ်းတွေအများစုဟာ တစ်ခုခုဆို သူတို့ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်မသိအောင် လုပ်လိုက်မဟဲ့ဆိုပြီး လိမ်တတ်၊ ဘတ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဒီလိုလိမ်တာကိုလည်း မိန်းမတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဟုတ်ကြီးထင်နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မိန်းမတွေဆိုတာ လိမ်ဖို့ဘတ်ဖို့လုံးဝမလွယ်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကို လုံးဝမလိမ်သင့်ဘူးဆိုတာ ဒီိအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပါ။ လူကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အမှန်ပြောနေတာလား လိမ်နေတာလားသိနိုင်တယ် သင့်ရဲ့ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် ဇနီးက သင့်အပေါ် […]
ပိုကျဆံ သိနျး ၄၀ ကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး သရုပျဆောငျ မသေနျးနုကို ပွနျတောငျးပနျလိုကျတဲ့ ရိုတ
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက ဝါရငျ့မငျးသမီးတဈဦးဖွဈတဲ့ မသေနျးနုတဈယောကျ ငှကွေေးလိမျလညျမှုနဲ့ ထောငျ တဈနှဈခမြှတျခံခဲ့ရတဲ့သတငျးဟာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ အတျောရိုကျခတျခဲ့ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ရိုတကလညျး မသေနျးနုဆီက အကွှေး သိနျး ၄၀ ရစရာရှိတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဖွဆေိုခဲ့တာကွောငျ့ ဂယကျတှကေ ပိုမိုထခဲ့ရပါတယျ… အခုအခါမှာတော့ ရိုတက သူပွောခဲ့တာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး […]
မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ဇနျနဝါရီလ (၈)ရကျမှ ၊ (၁၅)ရကျအတှငျး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ ၊ သတိပွုရနျ ၊ ယတွာပွုရနျ (၁)ပတျစာ ဟောစာတမျး
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. […]
ယူကရိန်း လေယာဉ်ပျက်ကျမှု လိုက်ပါသွားသူအားလုံး သေဆုံး Wednesday , January 8 , 2020 ယူကရိန်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စင်း ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က အီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက် လေယာဉ်ပေါ်ပါ လိုက်ပါသွားသည့် လေယာဉ် အမှုထမ်းနှင့် ခရီးသည် […]
ရိုတ ပြန်မတောင်းပန်ရင် ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ မေသန်းနု၏ရှေ့နေပြော
သရုပ်ဆောင် မေသန်းနုက ရိုတဆီက သိန်း (၄၀) ယူထားတယ်ဆိုပြီး ရိုတက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သရုပ်ဆောင် မေသန်းနုရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတစ်ဦးက ဖြစ်စဉ်များကို ပြန်လည် စစ်ဆေးတဲ့အခါ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတွက် သရုပ်ဆောင် ရိုတမှ […]